ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Douglas Spotted Eagle | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & Profiles: ဒေါက်ဂလပ်ပြောက်လင်းယုန်
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & Profiles: ဒေါက်ဂလပ်ပြောက်လင်းယုန်
ထုတ်လွှင့် Beat ရဲ့ "NAB ပြရန် နယူးယောက် Profiles "ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ပါဝင်ပါလိမ့်မည်သူထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့ပညာရှင်များနှင့်အတူအင်တာဗျူးတစ်ခုစီးရီးများမှာ NAB ပြရန် နယူးယောက် (အောက်တိုဘာ 16-17, 2019) ။
Sundance Media Group သို့များအတွက်ပညာရေးအစီအစဉ်၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်, ဒေါက်ဂလပ်လင်းယုန် Sundance Media Group သို့နှင့် VASST များအတွက်မူလတန်း UAS နည်းပြဆရာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်တွေ့လိုက်တယ်။ သူလည်းတစ်ဦးလူသိများတဲ့ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်, ကမ္ဘာ့ခရီးထွက်စပီကာ / နည်းပြများနှင့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, 2000 အတွက်ဂရမ်မီဆုကိုဘဲလျက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒေါက်ဂလပ်အများအပြားစာအုပ်တွေနဲ့ဒီဗီဒီ၏စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး, ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်, ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တစ်ခုအကြံပေးများနှင့်လမ်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူကအခုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် / sUAS (မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ / အသေးမောင်းသူမဲ့ဝေဟင်စနစ်) စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းကသူ၏စွမ်းအင်နှင့်အတွေ့အကြုံကိုအလေးပေး။ ဒေါက်ဂလပ် 1996 အတွက် Sundance Media Group ၏တစ်ဦးကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ခဲ့သည်။
2006 ကတည်းက Skydiving နှင့် 2012 ကတည်းက UAS ညွှန်ကြားချက်, ဒေါက်ဂလပ်စာရှောင်-action ကိုဗီဒီယို၏ adrenaline-ဖြည့်ကမ်ဘာပျေါတှငျသီးများစွာသီးတတ်သူအောင်မြင်သောဝေဟင်ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေကြောင်းကမ္ဘာကြီးထဲမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း, သူဟာအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု / လျှော့ချရေးဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်ဂလပ်ကသူ့ဘဏ်ဍာများအတွက်မြောက်မြားစွာဆုနှင့်အတူအသံနဲ့ imaging လိုလားသူဖြစ်၏ အဆိုပါ FAA Fars နှင့် FSIMs ၏ရငျးနှီးသညျ့အသိပညာနှင့်အတူဒေါက်ဂလပ် '' ရူပါရုံကိုအရာအားလုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် / မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် / UAS များအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်သို့ပုံရိပ်နှင့်လေကြောင်းအတှေ့အကွုံအသက်တော်နှစ်ပေါင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်ဂလပ်မကြာခဏပီဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်မှူးရှင်းရှင်းလင်းလင်း FAA ဥပဒေများကိုနားလည်စေရန် UAS, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် applications များ, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ညဥ့် UAS လေယာဉ်, ဝေဟင်လုံခြုံရေးစနစ်များနှင့် 107 သင်တန်း၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရုပ်ရှင်ပညာ, အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်ဆှေးနှေး။
ငါသူအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှအရှေ့မျက်နှာမှ multi-မြို့ Cross-တိုင်းပြည်ထုတ်လုပ်မှုခရီးစဉ်စတင်ခဲ့ရုံမရောက်မီဒေါက်ဂလပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသူပထမဦးဆုံးဂီတကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးသူလည်းမိမိသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသောအခါသူ့ကိုတောင်းစတင်ခဲ့သည်။ "ငါသည်ဂီတငါ့အသက်ကိုတစ်သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့တဲ့အခါအချိန်ကိုမှတ်မိမရဘူး" ဟုသူကပြောသည်။ "ကျွန်မတစ်နေရာရာ3န်းကျင်4သို့မဟုတ် 1970 ဂစ်တာသင်ခန်းစာတွေယူတတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ့် gelled ဘူး။ ငါ 12 လှည့်သည့်အခါ, ငါ Native အမေရိကန်ပုလွေရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်အသက်အရွယ်န်းကျင်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပလွေတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဂျင်း Luc-Ponty, Tomita ဒန် Fogelberg နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ဧရာတူသောအနုပညာရှင်များကထိုအချိန်ကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရ၏။ "
အတော်ကြာအယ်လ်ဘမ်မှတ်တမ်းတင်အပြင်, ဒေါက်ဂလပ် '' ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ TV ကိုထွက် branched ။ "ကျနော့်ရဲ့ဂီတ, အတန်ငယ်ပုလွေ /, jazz ပေါင်းစပ်တဲ့ rarified လယ်ပြင်၌တစ်ဦး standout ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း '' needledrops '[နောက်ခံသွင်းယူအဖြစ်အသုံးပြု prerecorded ဂီတ] မှဦးဆောင်ပါ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျနော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမှန်တကယ်အမှတ်ပေးအပိုင်းအစငါ၏အတတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထအယ်လ်ဘမ်သည်အထိဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး, ငါ multi-သူဟာ Emmy အနိုင်ရထုတ်လုပ်သူသူသည်ဘရိုင်ယန်ကိန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်၏ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။ ငါအရင်ကပြုသောအမှုဖွင့်ထက်သူကကျွန်မကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်ပုဒ်ရေးသားထား၏နာကျင်မှုသှနျသငျ, သူသည်ငါ့ကိုအကနျ့အသေးစိတျ၏စိတျရှညျသင်ပေးတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးသောအမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကိုငါသည်သူတို့၏တည်နေရာကိုခရီးထွက်သူတို့ကိုအကြားအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့ဘယ်မှာစကင်ဒီနေးနိုင်ငံတွေ၏ Sami အဘိဓါန်လူများ, အပေါ်တစ်ဦးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအပုဒ်တစ်ခုမှာစတော့ဟုမ်းအတွက် Benny Andersson ရဲ့ Abbas စတူဒီယိုတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ပါတယ်။ "
ဒေါက်ဂလပ်ဘာသာရပ်များ၏ကျယ်ပြန့ဖုံးအုပ်စာအုပ်အများအပြားရေးသားခဲ့သည်။ ငါသူသည်မိမိအရေးအသားကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပုံကိုသူ့ကိုမေးတယ်။ ".books ... ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြှနျုပျ၏" ဟုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ "ငါသည်အစဉ်အမြဲဖတ်နေခစျြတျောမူပါတယ်။ ကျွန်မငယ်စဉ်အခါကစာအုပ်တွေကသာမီဒီယာရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်ဒီတော့ကျနော်တို့က, မွေးမြူရေးခြံပေါ်မျှလျှပ်စစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကမှီတိုင်အောင်, ငါ့အိမ်မှာရှိသမျှ Nook နှင့် cranny အတွက်စာအုပ်တွေနှင့်ပြည့်စုံပြီ။ ငါကင်မရာများ, ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, စုစုပေါင်း ... 34 စာအုပ်တွေပေါ်ကလေထီးဖြင့်ခုန်ချ CMX တည်းဖြတ်ရေးစနစ်များ, NLE စနစ်များ, အလင်းရောင်, DV နှင့် HDV ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, LDS စိတ်ပညာ / သေကြောင်းကြံစည်မှု, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ, ပတ်ပတ်လည်အသံ, မိုက်ကရိုဖုန်းနည်းစနစ်ပေါ်တွင်စာအုပ်တွေကျမ်းစာ၌ရေးထားပါတယ်။ အားလုံးမဟုတ်တဦးတည်းခေါင်းစဉ်စင်တာဖမ်းယူခြင်းနှင့်တင်ပို့ကြီးမြတ်ပုံများနှင့် / သို့မဟုတ်အလွန်ကြီးစွာသောအသံန်းကျင်။ "
ဒေါက်ဂလပ်ငါ့ကိုလည်း Sundance Media Group သို့ပါလျက်မိမိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်အပ်ပေးတော်မူ၏။ "ငါသည်ဤကဲ့သို့သောလိပ်သဲသောင်ပြင်များနှင့် Digidesign အဖြစ်အသစ်ကဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖမ်းနည်းပညာ, သုံးစွဲဖို့လေ့ကျင့်ရေးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဂီတသမားတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ် 1994 အတွက် Sundance Media Group သို့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငါသည်တနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တစ်ဖက်ပေါ် ယူ. , 2012 အတွက်, ငါ့မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိအများစုကိုင်ဆောင်သူ, ဂျနီဖာ Pidgen ရန်သူ၏ရှယ်ယာရောင်းချခဲ့သည်။ အဖြစ်နာမည်ပြောင်းလဲ '' SMG, 'အုပ်စုယခုရေအောက် / ROV ဓာတ်ပုံမှအသံထုတ်လုပ်မှုကနေကွဲပြားသည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်နီးပါး 100 အတန်းပေးထားပါတယ်။ "
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, ဒေါက်ဂလပ်အလွန်မှတ်ဝေဟင်ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်တယ်, ဒါငါသူလယ်ပြင်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုမေးတယ်။ "ကျနော့် sUAS ဓါတ်ပုံ / ဗွီဒီယိုအလုပ်တခုဝေဟင်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ငါ၏အမှုထဲကကြီးပြင်းလာတယ်။ freefalling, ဒါမှမဟုတ်မိုးအောက်တွင်တစ်ဦး Skymaster 210 အတွက်ပျံသန်းပဲဖြစ်ဖြစ်, ဝေဟင်ဓာတ်ပုံကျွန်မကိုသဘောကျ။ 2010 ၌ငါ 'မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, RPAS, sUAS' 'ယခုအဖြစ်လူသိများဒီ tool အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်နှင့်သင်ယူရန်စတင်ခဲ့သည်။ မကွာပြီးနောက်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်ဖို့ sUAS ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2016 ခုနှစ်တွင်ရုံကြိုတင်သစ်ကိုဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်း, ငါတို့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် sUAS လေ့ကျင့်ရေးစံချိန်စံညွှန်းများဖန်တီးလျက်, 2016 မှာတင်ဆက် NAB ပြရန်။ "
မှဒေါက်ဂလပ်ပံ့ပိုးမှုများ NAB ပြရန် နယူးယောက်မြို့ကဒီအောက်တိုဘာလအဆိုပါ Post ကို / ထုတ်လုပ်ခြင်းညီလာခံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တင်ပြပါလိမ့်မည်သည့်လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ "ဟုဘတ်ဂျက်အပေါ်ကို Creative Lightning," ဖြစ်လိမ့်မည်။ "ငါ့ရဲ့ပထမဆုံး NAB ပြရန် တစ်ဦးတက်ရောက်သူအဖြစ် 1985 ၌ရှိ၏။ တစ်တင်ဆက်သူအဖြစ်အကြှနျုပျ၏ပထမနှစ်တွင် 1997 ခဲ့, ငါအဲဒီအခြိနျကတည်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတင်ပြခဲ့ကြရတယ်။ နဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးကြောင့်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ NAB ပြရန် မြှင့်တင်ရန်နှင့်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း enabled သိရသည်။ ငါဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်, ဒင်း Devlin, ဂျိုဒီ Eldred မှမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Sony က၏ရလဒ်အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ဖောက်သည်, Panasonic RedRock Micro နဲ့ FoxFury, ရာပေါင်းများစွာ NAB ပြရန်။ သူကတောင် 40 နှစ်အကြာ, ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အများဆုံးအလွန်အမင်း-တန်ဖိုးထားအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းပါပဲ။
" '' တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ကို Creative Lighting 'ငါတို့တစ်ဦး overhead ဘင်သို့သွားနိုင်မယ့်တစ်ခုတည်းသောအိတ်သို့ချုပ်ကိုင်ဗန်ထိရောက်စွာထုပ်ပိုးကြပုံကိုတက်ရောက်ပြသပါလိမ့်မယ်။ ငါဒီစနစ်နှင့်ဆင်တူစနစ်များကိုမှတောင်သယ်ဆောင်င့် ဧဝရက်, များစွာသောသံသယများနှင့်ပါဝါအရေအတွက်အတွက်အလားအလာတစ်ခုခုကိုမရရှိနိုင်, သို့မဟုတ်မဘယ်မှာအခြားနေရာများတွင်။ ငါအဆိုပါပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို predator'-ထုတ်လုပ်သူ-အယ်ဒီတာ-အခန်းကဏ္ဍ '' တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူမည်သူမဆိုဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော Micro-အလင်းရောင်သေးငယ်တဲ့အစုကို, အင်တာဗျူး, ကော်ပိုရိတ်အဖြစ်အပျက်, etc များအတွက်အလင်းရောင်၏အပေးအယူ-နည်းလမ်းများမပါဘဲတစ်ဦးတတ်နိုင်-သေးပုံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် , အသေးစား-ဧရိယာကိုဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်မှုအလင်းရောင်စနစ်များ '' သေနတ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ကော်ပိုရိတ်အင်တာဗျူးတွေ, ပြောနေတာအကြီးအကဲများ, သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအားဎ run ။ "
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဒေါက်ဂလပ်လင်းယုန်ပြောက် NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် NAB16 nabshow sUAS Sundance Media Group သို့ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် 2019-10-10
ယခင်: ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ဖြင့်အသုံးပြုသော OB ယာဉ်များအတွက်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Broadcast Solutions